‘इन्डियन भैया भन्न कहाँ पाइन्छ.- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
उपचारका लागि विदेश लैजाने टुंगो लागेन
असार २२, २०७३ अ‌ंगद ढकाल
काठमाडौं — उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको बताएका छन् । बुधबार ३ बजे पत्रकारहरुलाई गरिएको ब्रिफिङमा अझैपनि भेन्टिलेटरमै रहेको जानकारी गराइयो ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको बताएका छन् । बुधबार ३ बजे पत्रकारहरुलाई गरिएको ब्रिफिङमा कोइराला अझैपनि भेन्टिलेटरमै रहेको जानकारी गराइयो ।
प्रकाशित : असार २२, २०७३ १५:५९